Ngubani odale i icon eyonwabisayo edumileyo? | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Ngubani odale icon yodumo olunoncumo? I-ayikhon esiyisebenzisileyo ngaxesha lithile ebomini bethu, nokuba sithetha ngomnatha wonxibelelwano okanye sisebenzisa enye yezinto ezahlukileyo eziye zavela ngokuhamba kwexesha. Kodwa ngubani owenze lo mqondiso namhlanje othathwa njengeyona nto ibaluleke kakhulu ngaphakathi kwinethiwekhi nangaphandle. Impendulo yalo mbuzo yile, IHarvey Ibhola.
Isetyenziswe kwi-cinema kwiimuvi eyaziwa njenge Balindi okanye kumzi mveliso womculo njenge icon yeqela Nirvana, obu buso buncumileyo benza indlela yakhe esidlangalaleni, etsala abalandeli ngakumbi nangakumbi kwaye bazibeka njenge-icon eya kuthi yehle embalini njengenye yeempawu ezimelwe kakhulu kumashumi eminyaka akutshanje.
Ngokuqinisekileyo uyazibuza zingaphi izigidi umdali azizuzileyo yale iconokanye hayi? inyani kukuba umenzi wayo uthathe isigqibo sokungawenzi amalungelo awodwa omenzi wakhe kwaye awushiye simahla ukuze nawuphina umsebenzisi awusebenzise, ​​ebiza kuphela Iidola ze-45 yokuthunyelwa kwalo msebenzi. Inkqubo ye- Ncumo wazalwa ngo-1963 ngenxa ye- umkhankaso wokuthengisa Uyalelwe uHarvey Ball ukuze enze umanyano phakathi kweenkampani ezimbini ezinkulu ezizama ukubeka ecaleni ukubangisana kwexa elidlulileyo. Ngokulungileyo Imizuzu ye10 Uyise woncumo olukhulu wadala isimboli aza kuthi aye ezantsi kwimbali.
Ukusetyenziswa kwayo ukusasazeka ngokukhawulezaay yayisetyenziswa kwinkitha yemithombo yeendaba kubandakanya iziyobisi zoyilo ezavela kwiminyaka ye-80s ngexesha le- intshukumo Indlu eneasidi. Kwakusetyenziswa kwakhona ngabaculi bomculo abakhulu Nirvana apho sinokubona okwahlukileyo kwe icon yebhola.
Kuzo zonke iziphithiphithi ezivela kolu ncumo lincinci sibalaselisa yelizwe okanye usuku loncumo lwehlabathi, umsitho apho baqokelela khona imali kwimisebenzi eyahlukeneyo yezentlalo ngeenjongo zokwenza umhlaba ube yindawo ebalaseleyo kwisitayile esinyulu sefilosofi yoyise we icon.
Ngelishwa IHarvey Ball isishiyile ama-2001 njengesiphumo sesifo sesibindi, eshiya ngasemva uncumo oluya kuthi lusasazeke kubo bonke abo bantu bafuna ukudlulisa uvuyo kwimiyalezo yabo. Yiyo loo nto ilitye eliyintloko liphethe umsebenzi wakhe omncinci kodwa omkhulu.
Masingalibali ukuba ukwenza lula indlela Ihlala iyinto enzima kakhulu, inzima ngakumbi kunokwenza imilo entsonkothileyo, ngenxa yeso sizathu le icon iya kuhlala ikhunjulwa ngumntu wonke. Enkosi Mnu Harvey Ibhola ngokuba nokuncinci kunye nokuncinci kakhulu :)
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Ezahlukeneyo » Ngubani odale icon yodumo olunoncumo?